Waatee kooxda kalsoonida ku qabta inay sameyn doonto saxiixa Jadon Sancho bisha Janaayo?… (Ma Barca, Real, Man Utd mise Liverpool?) – Gool FM
(Manchester) 13 Dis 2019. Jadon Sancho ayaa soo jiitay indhaha caalamka oo dhan kaddib bandhigiisa cajiibka ah uu ka sameeyay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay naadiga Borussia Dortmund, taasoo ka dhigtay in dhamaan kooxaha waaweyn oo dhan ay raacdo u galaan adeegiisa.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa xaqiijiyay in maamulka Manchester United ay kalsooni ku qabaan inay lasoo saxiixan doonaan da’ayarka kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee xilliga qaboobaha.
Magaca Jadon Sancho oo 19 jir ah ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqi doono kooxda Manchester United inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee xilliga qaboobaha ee soo socda.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa tilmaamay in Manchester United ay la xiriirtay laacibkan, isla markaana ay ku qancisay inuu ku biiro Red Devils bisha Janaayo.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan inay sidoo kale socdaan dadaalo ay wadaan kooxaha qaar sida Manchester City, Barcelona, Real Madrid iyo Liverpool si ay u helaan adeega laacibkan.
Laakiin maamulka sare ee kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay go’aamiyeen heshiiska Jadon Sancho, isla markaana ay la soo saxiixan doonaan.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska uu Jadon Sancho ku joogo kooxdiisa haatan ee Borussia Dortmund uu dhacayo xagaaga 2022.
RASMI: Liverpool oo shaacisay in Tababare Jürgen Klopp uu ogolaaday inuu heshiiska u kordhiyo Kooxda... (Imise sano ayuu saxiixayaa?)